Hebei Zebung ngerabha Technology Co., Ltd yasekwa ngo-2003 kwaye ibekwe kwindawo yophuhliso Jing County, kwiPhondo Hebei, China.
I-ZEBUNG ingenise iiseti ezi-4 ze-VP yase-Italiya kwimveliso yokuvelisa umbhobho wamanzi, inyuse umgca wokuvelisa ithumbu leoyile yaselwandle kwithumbu elikhulu.
I-ZEBUNG yongeze iiseti ezimbini zemigca yokuvelisa umbhobho wamanzi, kunye neeseti ezingaphezu kwe-20 zovavanyo kunye nezixhobo zokuhlola.
UZEBUNG ubambisene neZiko lobuNjineli baseLwandle kwiYunivesithi yasePetroleum yase China. Kwakuloo nyaka mnye, ngokweemfuno ezingqongqo zeBhunga likaRhulumente kukhuseleko lokusingqongileyo, ulwakhiwo olutsha lweziko lokuxuba lajoyina.
UZebung usamkele isatifikethi se-OCIMF-GMPHOM 2009 esiqinisekiswa yi-BV.
Emva kweminyaka engaphezulu kwe-17 yophuhliso olukhawulezileyo, iZEBUNG isebenza njengeshishini lenkokeli yetekhnoloji. Imali ebhalisiweyo ye-ZEBUNG inyuke yaya kwizigidi ezingama-59, abasebenzi abangaphezu kwe-150, abasebenzi besayensi abali-10, iinjineli ezintathu eziphezulu, ngaphezulu kweeseti ezili-120 zezixhobo zemveliso.
Iimveliso eziphambili ze-ZEBUNG zezi: ithumbu elikhulu le-oyile yaselwandle (i-oyile engaphantsi kolwandle / i-floating, i-oyile edadayo / ithumbu leoyile yedoksi / umbhobho we-STS); Ubungakanani obukhulu bombhobho wokuguqa (ukuntywila emanzini / umbhobho omdaka wokuhambisa); Umzi-mveliso werabha yombane-ithumbu lokutya le-FDA / i-UHMWPE ithumbu yerabha yekhemikhali / ithumbu leoyile ye-hydraulic / ithumbu leelori / ithumbu lesanti / ithumbu lekhonkrithi / ithumbu lombane / ithumbu leoyile yepetroli njalo njalo. Zonke iimveliso zifumene i-BV ISO9001: 2015 isiqinisekiso senkqubo esemgangathweni yamazwe aphesheya. Okwangoku i-ZEBUNG ivunyelwe yi-BV-OCIMF esemgangathweni ye-GMPHOM 2009 yokuqinisekiswa kwethumbu laselwandle kunye nokuqinisekiswa kwe-FDA.
"I-Boutique" ngumgangatho womsebenzi we-ZEBUNG, "ukuthembeka" lilitye lembombo le-ZEBUNG, "inqanaba lokuqala" ziinjongo zika-ZEBUNG, i-ZEBUNG ihlala ithobela "ukuthembela kubuchwepheshe obuphambili kunye neetalente ukwenza amashishini ngolawulo oluphezulu kunye nenkonzo" Sizama konke okusemandleni ethu ukukhuthaza uphuhliso lwamashishini ombhobho kunye negalelo kuwo onke amandla ethu.